Guddoomiye Cali Gacal Casir oo xilkii Mooshin looga qaaday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Guddoomiye Cali Gacal Casir oo xilkii Mooshin looga qaaday
Ardaan Yare 13 September 2018 13 September 2018
Qaar kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka maamulka Galmudug oo kulan ku yeeshay Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud ayaa goordhow shaaciyay in xilkii ay ka qaadeen Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir.
Kulanka ay yeesheen Xildhibaanadaan ayaa waxaa shir gudoominayay Gudoomiye ku xigeenka Xareed Cali Xareed,iyadoo ay soo xaadirtay 147 Xildhibaan oo kamid ah Baarlamaanka Galmudug.
Sidoo kale Xildhibaanada ayaa cod gacan taag ah uga qaaday xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka maamulka Galmudug Cali Gacal Casir.
Mooshin ka dhan ah Guddoomiye Cali Gacal Casir ayaa maalmahan waxa uu ka socday Magaalada Dhuusamareeb,kaasi oo ay gudbiyeen qaar kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka maamulka Galmudug oo ku sugan Dhuusamareeb.
AKHRISO:-Magaca Ergeyga cusub ee QM ee Soomaaliya